Nomad wuxuu cadeeyaa shaki ku saabsan sida loogu badalo batteriga AirTag leh Loop Loop | Waxaan ka socdaa mac
Toddobaadyo ka hor waxaan ku aragnay bogga mid ka mid ah qalab badan oo Nomad u leeyahay AirTags. Xaaladdan oo kale waa tan Xargaha maqaarka Loop taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan ku qaadno aaladdeena tilmaame si dhab ah oo xarrago leh meel kasta.
Hagaag waxay umuuqataa in kadib sacab mug leh oo su'aalo ah oo ay weydiyaan dadka isticmaala sida aan ugu badali karno batteriga AirTag qalabkan furaha ah, shirkadda lafteeda ayaa shaqada u degtay oo fiidiyoow ka sii deysay, runti waa wax fudud.
Xaaladdan oo kale waxaan dhihi karnaa in shakiga uu yahay mid macquul ah in la sameeyo qalabka Nomad ee lagu dhejiyo 3M cajalad laba-geesood ah oo toos ah qalabka, markaa waa wax iska caadi ah in isticmaaleyaashu ay la yaabaan sida ay u awoodaan batteriga ka saar qalabka marka uu dhamaado ama aad toos u rabto inaad bedesho qalabka AirTag. Marka bal aan daawanno muuqaalka.
Sida aad ku arki karto fiidiyowgaan, runtii way fududahay inaad bedesho batteriga adigoon ka fureynin giraan fure qalabka aaladda. Dhinaca kale, waxaad sidoo kale sameyn kartaa ka saarida xargaha furaha si toos ah adoo fidinaya. Dareenkan, waa in lagu xisaabtamo inay macquul tahay in intaas ka dib ay isku mid noqoto iyo haddii aan rabno inaan mar kale dhigno. Dhinaca kale waad arki kartaa mabda 'ahaan maahan inuu ka tago hadhaaga xabagta Haddii aan doorbidno inaan si toos ah uga saarno, haddii ay dhacdo in muddo ka dib ay ka baxdo nooc ka mid ah xabagta, waxaa si fudud loogu nadiifin karaa aalkolo yar oo isopropyl ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Nomad wuxuu ka jawaabayaa su'aalaha ku saabsan sida loogu beddelo batteriga AirTag leh Loop Loop
New HomePod beta wuxuu hagaajiyaa dhibaatooyinka jira wuxuuna ku darayaa Khasaare la'aan